धादिङ दुर्घटनामा मृत बालक बोकेर भावुक देखिएका यी व्यक्ति को हुन् ? – mero sathi tv
धादिङ दुर्घटनामा मृत बालक बोकेर भावुक देखिएका यी व्यक्ति को हुन् ?
On १३ कार्तिक २०७४, सोमबार ०९:०१
पृष्ठभूमिमा विशाल त्रिशुली नदी बगिरहेको छ । ठूलो चट्टानमाथि एउटा मानिस मृत बालक बोकेर अघि बढिरहेको छ । सेतो गाउन लगाएका प्लस लेखिएको छ ।
‘मेरो जीवनमा यो निकै दुखद घटना हो । छतविक्षत देखिने मृत शरिर र घाइतेहरु चिच्याहट उस्तै थियो,’ नारायणले दियोपोस्टसँग भने,‘मलाई निकै पिडा भएको थियो ।’
उनले धादिङका अधिकांश ठूला विपतहरुमा उद्धार गर्दै आएका छन् । तर, यो घटना भने सबैभन्दा पीडादायी रहेको उनी सुनाउँछन् ।
उनी विहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म उद्दारमा खटिएका थिए ।
‘मैले ११ वटा बालबालीकाको शवको उद्दार गरेँ,’ उनी सुनाउँछन्,‘त्यो क्षण निकै दुखदायी थियो ।’
‘एउटा नदी, एउटा चट्टान, एउटा मृत बालक अनि रमिते हामी । थकित, निद्राग्रस्त र जड्याहा एउटा ड्राइभर, पैसा भए पुग्ने र क्षतिपूर्ति बिमाबाट भैहाल्छ भन्ने एउटा बसमालिक, क्षमता भन्दा बढी सवारी कोचेको पैसा पाएपछि नदेखे झैं गर्ने एउटा ट्राफिक प्रहरी, बाटोको दुरावस्था नदेख्ने एउटा सडक बिभाग,’
यी सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो मृत बालक र त्यस बालकलाई अंगालोमा लिने व्यक्तिको अनुहारमा व्यक्त पीडाले । राजविराजबाट काठमाडौँ आउदै गरेको बस गजुरीको घाटवेसीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ज्यान गुमाएका सबैमा र विशेष गरि यस पिक्चरमा देखिएको अवोध बालक प्रति अश्रुपुरित श्रद्धासुमन चढाउ छु,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
दुई पटक सुहागरात मनाउने नेपाली सेलिब्रेटी, कोही पछुताए कोही रमाए
गुल्मीमा माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा ७ को मृत्यु, ६ घाइते